ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက်၊ သူ့သားနဲ့ သူ့တရား | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Opinion » ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက်၊ သူ့သားနဲ့ သူ့တရား
မြန်မာစကား၌ ဆင်စီး၍ မြင်း ရံဆိုသည့် စကားရှိပါသည်။ သား တို့၊ သမီးတို့အပေါ် မိဘတို့က ထားရှိအပ်သည့် မေတ္တာနှင့် ဆန္ဒ ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့်သမီးက ဆင်ကြီး ပေါ်၌ တက်၍စီးကာ မြင်းများက လည်း ဝန်းရံ၍ ထားရသည့် ဘဝ အနေအထားဟု ဆိုကတည်းက သာမန်အနေအထားမျိုး မဟုတ် ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ သြဇာ အာဏာ ရာထူးအရှိန်အဝါ ထိပ် တန်းထဲကဟု ပေါ်လွင်နေပါ သည်။
သြော်. . . ကိုယ့်သား၊ ကိုယ် သမီးကို ဆင်နင်း၍ မြင်းကန်သည့် ဘဝအနေအထားမျိုးသို့ မကျ ရောက်စေလိုဘဲ ဝင့်ကြွား စွင့်ကား စေလိုသည့် မိဘတို့၏ တောင့်တမှု များ။ ဘုန်းကြီးပါစေ၊ အသက်ရှည် ပါစေ၊ ဥစ္စာဓနပေါကြွယ်ဝပါစေ၊ ပညာတတ်ပါစေ၊ အန္တရာယ်ခပ် သိမ်းကင်းငြိမ်းပါစေ စသည် စသည်ဖြင့် ပေးလိုက်ရသည့် ဆု များ။
သို့သော် တကယ့် တကယ် တမ်းကဖြင့် လူ့ဘဝဇာတ်ကွက်၊ ဇာတ်လမ်းများက မိဘတို့တောင့် တသည့်အတိုင်း လွယ်ကူလှ၊ ပြေ ပြစ်လှ၊ ချောမောလှ၊ ကြည်နူးစ ရာ အတိဖြင့် ပြည့်နှက်နေလှသည် မဟုတ်ပါ။
အားနည်းချက်များ၊ ကြောက်ရွံ့စိတ်များ၊ အရှုံးများ၊ အနိုင်များ၊ ပြန်မစဉ်းစားချင်သည့် အတိတ် များ၊ လှမ်းမျှော်တိုင်း မောရသည့် အနာဂတ်များ၊ တမင်တင်းထားရ သည့် မျက်နှာများ၊ လွတ်လပ်ပေါ့ ပါးသည့် ရယ်မောမှုများ စသည် စသည်ဖြင့် ပဉ္စလက်ဆန်သော ဇာတ်အိမ်ကြီးဖြင့် ပြည့်နှက်နေ သည့် ကာလစဉ်ကြီးသာ ဖြစ်ပါ သည်။ ပေါင်မုန့်ကို မည်သည့်ဘက် ၌ ထောပတ်သုတ်ထားကြောင်း သိသလို လူ့ဘဝ၏ အကောင်း ဘက်ခြမ်းတွေကိုချည်း ရွေးယူနေ ၍ အမြဲရတတ်သည်မျိုး မဟုတ် ပါ။
သို့ဖြစ်ရာ ကိုယ့်သား၊ ကိုယ့် သမီးအပေါ် ဆင်စီး၍ မြင်းရံနေ သည့် အခြေအနေကိုချည်း မျှော် လင့်တောင့်တမနေဘဲ ဆင်နင်း၍ မြင်းကန်ခဲ့သော်ဟူသည့် အခြေအ နေကိုလည်း ထည့်တွက်ကာ အဆိုးကိုရော၊ အကောင်းကိုရော လက်ခံလျက် ယင်းကို မည်သို့ ကျော်ဖြတ်မလဲဆိုသည့် စိတ်ခွန် အားမျိုး ရှိစေရန် တောင့်တသည် က ပို၍ လက်တွေ့ဆန်ပါသည်။
‘တက်ကျမ်း’ ဟု လူတို့ခပ် လွယ်လွယ် ခေါ်နေကြသည့် အောင်မြင်တိုးတက် ကြီးပွားရေး လမ်းညွှန်စာအုပ်များနှင့် ပတ်သက် ၍ မိတ်ဆွေ ဟာသ စာရေးဆရာ တစ်ဦး အသောအထေ့ပြောသည့် စကားတစ်ခွန်းကို အမှတ်ရမိပါ သည်။
သူက ‘တက်ကျမ်း’ က အရေးမကြီးဘူးတဲ့။ ‘ကျကျမ်း’ က အရေးကြီးတာတဲ့။ သူ ‘ကျကျမ်း’ ရေးမ လို့တဲ့။ သြော်...ရယ်ရွှင်ဖွယ် စကားဟု ဆိုသော်လည်း အဓိပ္ပာယ်က တာသွားလိုက်ပါဘိ။ အောင်မြင် အောင် မည်သို့ လုပ်မလဲဆိုသည် က အရေးပါသကဲ့သို့ ကျရှုံးသော် မည်သို့ ရင်ဆိုင်မည်နည်းဆိုသည် ကလည်း လူ့ဘဝ၌ အရေးပါပါ လေသတဲ့။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် လူတိုင်းကျရှုံးတတ်၍ ဖြစ်ပါ လေသတဲ့။ ထို့ကြောင့် ‘ကျကျမ်း’ က အရေးပါပါလေသတဲ့။
သို့ဖြစ်ရာ သားသမီးတို့ကို အောင်ပွဲအတွက် မျှော်လင့်လမ်း ညွှန်ထားရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ရှုံးပွဲ အတွက်လည်း လမ်းပြရန်လိုအပ် ပါသည်။
ကိုယ့်သားကို ကိုယ်ဆန္ဒရှိ ရာ၊ မျှော်လင့်ရာ၊ သွန်သင်ဆုံးမ ရာ၌ အမှတ်တရဖြစ်စရာကောင်း သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက် ရှိပါသည်။
ဒေါက်ဂလပ်စ် မက်အာသာ (Douglas MacArthur)။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ပစိဖိတ်စစ် မျက်နှာ (Pacific Theater) ၌ လက်စွမ်းပြ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကာ ၁၉၃၀ လွန် နှစ်ကာလများအတွင်း က အမေရိကန်တပ်မတော်၏ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့သူ။ ၁၈၈၀ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်ဖွား၊ ၁၉၆၄ ဧပြီ ၅ ရက် အနိစ္စရောက် သူ။
မက်အာသာမှာက သားတစ် ယောက်ရှိပါသည်။ အာသာမက် အာသာ (Arthur MacArthur)။ ပထမဇနီး Jeam MacArthur နှင့် ရသည့်သား။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမက်အာ သာက ထိုသားကို ရည်ရွယ်ကာ ရေးသည့် စာတစ်စောင်မှာ အလွန် ထင်ရှားပါသည်။ စစ်သည်တော် တစ်ဦး၏ သားအတွက် ဆုတောင်း (A soldier’s prayer for his son) ဟူသည့်စာ။
မြန်မာစာရေးဆရာ အသီးသီးတို့ ထိုစာကို ဘာသာပြန်ကြ၊ ကောက်နုတ်ဖော်ပြကြ၊ ဝေဖန်ရေးလုပ်ကြနှင့် တော်တော့်ကို လူသိ များသည့် ဆုတောင်းစာကလေး တစ်စောင်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ သူ သူ၏သားကို မျှော်လင့်ပုံက ကျွန်တော်တို့ အများစုနှင့်သိပ်မ တူ။ ဆင်စီးတာတို့၊ မြင်းရံတာတို့ မပါ။
‘Build meason, O’ Lord, who will be strong enough to know when he is weak’ ဟူ၍။
ယင်းကို ဆရာကြီးတက်တိုး ဘာသာပြန်ဆို ထားပုံကလည်း ထိမိတိကျလှပါဘိ။
‘အို. . . အရှင် အင်အားနည်း သည့်အခါ အင်အားနည်းမှန်း သိ နိုင်လောက်သော စွမ်းအားရှိသည့် သား. . .’ တဲ့။ သားကို ထိုသားမျိုး လုပ်ပေးပါဟု ဘုရားသခင်ကို တောင်းဆိုနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်မှာ အင်အားနည်းသည့်အခါ နည်းမှန်း သိရလေမတဲ့။ ကိုယ့်အ နေအထားကိုယ် အမှန်အတိုင်းမ မြင်ဘဲ ကြမ်းကြမ်းပြောရလျှင်ဖင် ခေါင်းကျယ်နေသည့် သားမျိုးမ ပေးပါနှင့်တဲ့။
‘brave enough to face himself when he is afraid, one who will be proud and unbending in honest defeat, humble and gentle in victory.’
ယင်းကို ဆရာကြီးတက်တိုး က လှလှပပ ဘာသာပြန်ပေးပါ သည်။
‘ကြောက်သည့်အခါ မိမိ ကိုယ် မိမိ ရင်ဆိုင်ရဲသောသား၊ ရိုး သားစွာရှုံးနိမ့်ရာတွင် ဂုဏ်ယူ၍ ဦးမကျိုးသောသား၊အောင်နိုင်ရာ တွင် နှိမ့်ချ၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော သား. . .’ တဲ့။
အံ့သြငေးမော မှင်တက်မိ ဖွယ်ရာ လက်နက်ကိုင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်၏ လူကြီးလူကောင်း ဆန်သည့် မျှော်လင့်တောင့်တမှု။
လူဆိုသည်မှာ ရံဖန်ရံခါ ကြောက်စရာနှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ် လေသတဲ့။ ထိုအခါ ရင်ဆိုင်ရဲသည့်သားတဲ့။ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ရင်း ရှုံးနိမ့်သည့်အခါ ရိုးသားမှုအ တွက် ဂုဏ်ယူရန်နှင့် ဦးမညွှတ် သောသားတဲ့။ ကိုယ်ကအောင်ပွဲ ဆင်သည့်အခါတွင်လည်း ငါနိုင်ပြီ ဟု ဘဝင်ကြွမသွားဘဲ နှိမ့်နှိမ့်ချချ ဖြင့် နူးညံ့သည့်သားတဲ့။
ထို့ပြင် သားကို လွယ်သော လမ်းကို မပေးဖို့၊ ခက်သောလမ်း ကိုပေးဖို့ စသည် စသည်ဖြင့်လည်း ဆုတောင်းပါသေးသည်။ မိမိ ကိုယ်ကို စိုးမိုးသောသား၊ အ တိတ်ကို မမေ့သောသားဖြစ်စေရန် တို့ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမက် အာသာ၏ ဆုတောင်းမှာ ပါဝင်ပါ သေး၏။
သူ့သားအတွက် သူ့မျှော်လင့် ချက်၊ သူ့ဆန္ဒ၊ သူ့ဆုတောင်းတို့က လက်တွေ့ကျလိုက်တာ။ ကျွန် တော်တို့လို ကတ္တီပါဖိနပ်စီး၊ ရွှေထီးဆောင်း မျှော်လင့်ချက်မ ဟုတ်။
တောင်ကိုရီးယားရုပ်မြင်သံ ကြား အစီအစဉ်၌ သူတို့ဆီက နာ မည်ကျော် အနုပညာရှင်တို့ သူတို့ ၏ ရင်သွေးများကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အခြေခံလူတန်းစားတို့ နေထိုင်ရာ ကျေးလက်တောရွာများဆီသို့ ခေါ် ဆောင်သွားပြီး အခြေခံ လူထုတို့ ၏ ဘဝကို မြေကြီးဆန်ဆန် နေ ထိုင်ကြရပုံများကြားသို့ တစ်သား တည်းနေထိုင်ခိုင်းကာ စိတ်ကို လေ့ကျင့်ပေးပုံများသည် မိဘ ကောင်းတို့၏ ပြုပြင်မှုပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ‘‘ငါတို့က လူတိုင်း လူတိုင်း ထက် မြင့်မြတ်တယ်ကွ၊ သမီးတို့၊ သားတို့ရဲ့’’ ဆိုသော သွန်သင်မှု အောက်က လွတ်ထွက်သွားနိုင်သူ များပင် ဖြစ်ပါသည်။
သြော်. . . အမေရိကန်ဗိုလ် ချုပ်ကြီးတစ်ယောက်၏ သားကို လူသားဆန်စေမှု တရားများပင် မဟုတ်ပါလား။။